Ungangitshela indlela yokuthola i-backlinks ye-EDU?
Ngisembonini ye-Search Engine Optimization cishe eminyakeni emihlanu kakade. Futhi ngiyaqonda ukubaluleka kokuqonda okuhle ukuthola ama-backlink e-EDU. Yingakho kule ngxoxo ngizokukhombisa isu elihle lokunikeza inqubekela phambili ebalulekile kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Leli qhinga libheja ngokuyinhloko kuma-scholarships, kanti empeleni kuzovumela wonke umuntu ukuba athole lezo zixhumanisi eziqondile zokufundisa ngaphandle kokukhokha ipenny, okungenani ngokuqondile. Ngakho, ngaphasi ngizokukhombisa ukuthi ungathola kanjani ama-backlinks e-EDU ngesinyathelo esilandelayo Ngisanda kuvivinya ngaphakathi ukuze ngakhe isethi yami yezixhumanisi ezingu-15 kumawebhusayithi wezemfundo phakathi nezinyanga ezimbili noma ezintathu. Yebo, kwakuyinto yokudla isikhathi esiningi, kodwa izohlala ikhokha ngokuqinisekile - logiciel suivi de projet informatique.
Indlela yokuthola i-EDU Backlinks - Umhlahlandlela Owusizo
Ingxenye 1: Ukukhetha I-Target Efanele
Ngaphambi kokuba siqale, ukukhetha izithameli eziqondiwe ezifanele kanye ne-niche efanele kubaluleke ngokulinganayo hhayi kuphela emuva kwe-backlink yemvelo, kodwa ekuqondeni kahle kokuthola ama-backlinks e-EDU futhi uqale ukuhamba endleleni efanele kusukela ekuqaleni. Ngisho noma uma kwenzeka kubonakala imidwebo eqondakalayo yokwakha isixhumanisi semfundo kuzodingeka ukwazi izithameli zakho ezibhekiswe kuzo, okufanele zihambisane kakhulu nesifundo sakho sewebhu noma ibhulogi. Ukubeka ngesiNgisi esicacile, konke okudingayo ukuqala ukukhomba izethameli zabafundi. Ngesikhathi uzothola ama-backlink ezemfundo eziwusizo, qiniseka ukuthi bazoba nesithakazelo esikhulu ohlelweni lwakho lokufunda abafundi.
Isigaba sesi-2: Ukwakha ikhasi le-Scholarship
Okulandelayo, kufanele usebenze ekhasini lakho lokufundela. Ngenkathi kungcono umsebenzi olula ukudala lolu hlobo lokuqukethwe, nansi amanye amaphuzu amasha ukuze ukhokhe ngokukhethekile. Qinisekisa ukuthi unakho konke okukhona kulokhu okulandelayo:
Incazelo yenkampani - yenza kube mfushane okwamanje ephelele, into efana ne "link links scholarship". "Okulandelayo, yixhumanise ngaphakathi ekhasini lakho eliyisiqalo, kanye nezinye izigaba ezibalulekile ukudlulisa ijusi lokuxhumanisa.
Ukufaneleka - kuzodingeka ukwenze konke ngokufanelana nabafundi bakho ababhekiswe kuzo. Qinisekisa ukuthi ucabangele ukuthi banesikhathi esiphelele noma sesikhathi sesikhathi, noma yiziphi izifundo ezithile eziqondene nesihloko sakho esiyinhloko, yiliphi izwe (idolobha, noma lendawo) okungenzeka livela kuzo, njll.
Inani eliphakeme - Yebo, inani le-scholarship lixhomeke kakhulu kwisabelomali sokwakha isixhumanisi sakho. Kodwa mina, ngincoma ukuyibeka cishe ngama-dollar ayizinkulungwane. Uma kungenjalo, kungase futhi kuhluleke ukuheha noma yiziphi izikhungo zemfundo ezihloniphekile neziqu zabo.
Imininingwane yokufaka isicelo - konke okudingayo lapha kuzomele uhlele isigaba esicacile nesiqondakalayo. Kuzokwenza ukuthi ifomu lakho lesicelo eliyinhloko lizosetshenziswa yilowo nalowo ozobhapathizwa ukuze athumele ohlelweni lwabafundi. Ngaleyo ndlela, qinisekisa ukuthi ucacise isikhathi sokugcina kanye nezinsuku zokuvuza.
Isigaba sesi-3: Amathuba okufinyelela
Mina, ukuze ngibheke amathuba amakhulu isakhiwo sokuxhumana semfundo ngasebenzisa ispredishithi se-Excel. Ngaleyo ndlela, ngingakwazi ukusingatha ukuqapha okunembile kwemisebenzi yami yonke ngekhasi lezinkampani zezifundo, isimo sobuhlobo, igama, ikheli le-imeyili, izizinda, amazwi, njll.Lokhu kungenza izinto zibe lula kakhulu!
Isigaba sesi-4: Ukuqeda ukukhipha
Ekugcineni, ukuze uthole ukuqonda ngokugcwele ukuthi ungathola kanjani ama-backlink e-EDU, kuzodingeka uqedele ukufinyeleleka. Futhi lapha kuzodingeka wenze ngokusebenzayo futhi usebenze kanzima ukuze uthole umuntu oxhumana naye ekugcineni. Khumbula, wonke amanyuvesi namakholeji anamalungu abasebenzi abathintekayo ukubhekana nawo. Ngakho-ke, konke okudingayo ukwenza i-template eqinile ye-imeyli bese uthumela imigebe kulabo bantu benethemba lokuphendula okuhle. Uma usuqedile, kuzodingeka uthumele imininingwane yocwaningo lwakho, noma ugcwalise ifomu elithile elinikezwe isikhungo semfundo.